Isu tinobatsira nyika kukura kubva 1998
Formwork, Scaffolding & ACP Mugadziri uye Exporter muChina Kweanopfuura Makore makumi maviri
Inogadziriswa Steel Prop
Aluminium yakasimba panel
Sei kufuremu scaffolding inoshanda?
Vazhinji vashandi vekuvaka ikozvino vanoshandisa furemu scaffolding kuti vavandudze kushanda zvakanaka. Zviri nyore uye nekukurumidza. Inoshanda zvikuru. Frame Scaffolding System yakachengeteka uye yakavimbika: kuita kwakanaka kwese, kuita kwakaringana kubereka, kuita kwakanaka kusapinda mvura Door furemu scaffold yakachipa ...
Aluminium formwork uye Traditional huni formwork Kuenzanisa kwehupfumi mabhenefiti
na admin pa 21-05-25
Aluminium formwork uye Traditional wood formwork Kuenzanisa kwehupfumi mabhenefiti Project Aluminium formwork Yechinyakare huni formwork Upfumi uye unoshanda Mamisikirwo Nyanzvi yekuvaka, kuchengetedzeka, kugadzika nyore uye disassembly Tsaona dzedziviriro dzinowanzoitika, disassembly yakaoma ...
Nei mutengo wesimbi wakakwira zvakanyanya mushure meMay 1, 2021?
na admin pa 21-05-11
Chikonzero chikuru: 1 "Carbon peaking and carbon neutrality" kuzvipira kwakadzama kwakaitwa neChina kupasi rose, uye mapurojekiti asingazadzise zvinodiwa zvekushandiswa kwesimba rakawanda uye kuburitswa kwakanyanya kunofanirwa kuraswa zvakasimba. Uku kugadziridza kwakadzama uye kwakadzama kwehupfumi nemagariro....
Nzira yekugadzira ringlock scaffolding? Chigadzirwa chakakurumbira muIndonesia, Philippine, Thailand, Vietnam, Cambodia, Egypt, Saudia arabia
na admin pa 21-04-20
Iyo ringlock scaffolding imhando nyowani ye scaffolding system. Iyo ringlock scaffolding inonziwo disc lock scaffolding, rosette ringlock scaffolding uye layher scaffolding, etc. Yakashandiswa zvakanyanya mumapurojekiti ekuvaka senge viaducts, tunnels, mafekitori, nezvimwewo, uye inogona kushandiswa zvakare ...
Munda wekushandisa weringlock scaffolding muSouth East Asia
na admin pa 21-04-15
Munda wekushandisa we ringlock scaffolding muSouth East Asia Chinhu chikuru che ringlock scaffolding chakaiswa mu "ringlock ring plate", danda rescaffolding rakasungwa nendiro, iro rakachinjika rakashongedzerwa nejoint, uye bhaudhi rinoshandiswa sechibatanidza. kugadzira ri...
Mitengo yesimbi yemumba inoramba ichikwira
na admin pa 21-04-13
Maonero epakati: Kubva padivi rekupa, zvigadzirwa zvesimbi zvemumba zvinokanganiswa nekugadziriswa kwe "carbon neutral" strategic policy, iyo inorambidza kugadzirwa kwesimbi mudzimba mukati uye kwenguva refu. Munguva pfupi, Tangshan neShandong kuchengetedza kwezvakatipoteredza kuchazorora ...
Kuvaka formwork-6 maitiro ekuvaka zvinhu plywood formwork
na admin pa 21-04-09
Kuvaka formwork-6 hunhu hwekuvaka plywood formwork Huni masikweya uye formwork yagara iri hupfumi huviri hwenzvimbo dzekuvaka. Mumakore achangopfuura, plywood yekuvaka formwork yakakurumidza kukura, uye iyo huru yemiti mhando inogadziriswa eucalyptus uye poplar. Iyo ap...
Kuenzanisa mutengo wemapofu haisi sarudzo, uye iwe unofanirwa kuterera kune aya mapoinzi paunenge uchitenga ringlock scaffolding!
na admin pa 21-04-02
Svondo rapfuura, vhidhiyo yerosette yeyakaderera ringlock yakapwanywa. Muvhidhiyo, unogona kuona kuti mushandi airova dhisiki nepombi yesimbi. Mushure mekugogodza kaviri chete, disc rakanga ratsemuka. Sechinhu chakakosha cheiyo ringlock-mhando scaffold, iyo ringlock disc chikamu chakakosha icho ...
Kana scaffolding yamiswa, sei kuenzanisa mapaipi uye couplers?
na admin pa 21-03-16
Kana scaffolding yamiswa, sei kuenzanisa mapaipi uye couplers? Kunyangwe iwe uchigona kusarudza cuplock, ringlock, cross-lock, etc., ye racking, yemutengo, kuita, uye nyore kufunga, coupler-mhando yesimbi pombi scaffolding ichiri kutora yakawanda yemusika. Inogona kushandiswa kwete chete ...
Ringlock scaffolding iri nani pane cuplock scaffolding?
na admin pa 21-02-04
Ringlock scaffolding iri nani pane cuplock scaffolding? Ringlock scaffolding uye cuplock scaffolding imhando nyowani dze scaffolding, uye ese ari maviri anogona kushandiswa sekutsigira formwork, saka vaviri vacho varipi vanowanzofananidzwa, asi vanhu vazhinji vanofunga kuti ringlock scaffolding iri nani pane cuplock sca...
Zvakadini ne galvanized scaffolding? Zvakanaka kushandisa?
na admin pa 21-01-25
Galvanized scaffolding kazhinji inoreva kune yakakurumbira ringlock scaffolding. Iyo pamusoro peiyo ringlock scaffolding inobatwa nekupisa-dip galvanizing process, uye hupenyu hwesevhisi hwakakwira semakore gumi nemashanu. ringlock scaffolding ine mutengo wakaderera uye kushanda kwakanyanya. Zviri nyore kuparadzanisa uye ...
Fengqi Rd, Yinzhou District, Ningbo Guta, Zhejiang, CHINA
Korean mayunivhesiti anotenga epurasitiki formwork ...
Yakaunzwa aluminium veneer
04,08,21Chikumi 16, 2017
The formwork kuenzanisa uye kuongorora.
02,07,21Chikumi 16, 2017
30,06,21Chikumi 16, 2017
Scaffold Screw Base Jack, Ringlock Scaffolding Zvikamu, Zvikamu Zvikamu Threaded Base Jack, Kwikstage Scaffolding Accessories, H Type Frame Scaffolding, Ringlock Scaffolding Bracket,